Articles Gudiga Olombikada looma doorto sidii dowladihii 4.5 ee haku qaldamin!!! Category: warka	Published on 19 January 2013	Hits: 441	Doorashada halkaasi ka dhacdey waxaa Musharax Gudoomiyaha ahaa C/laahi Axmed Tarabi oo si weyn u garaneyso bulshada Sportiga ahaana xoghayihii gudigaasi iyadoo aysan jirin cid la tartantey halkaasina ku heley codkii 18 ahaa ee goobta joogtey ee xaqa u lahayd inay wax doortaan sida xeerku qabo.
Aqristoow maaha qasab in musharaxu hadii la waayo cid la tartanta oo keligii isku soo taago doorashada la baajiyo ee cod ayaa loo qaadayaa,adigoo tusaale usoo qadan kara heyadaha sporti ama siyaasad ee caalamka,xusuuso isla bartamaha bishaan Xiriirka kubadda cagta ee Talyaaniga ayaa Giancarlo Abete mar kale u doortey xilka inuu sii hayo ilaa 2017 keligii ayaana isku soo taagey xilkaasi.
Maadaama uu geeriyoodey Allaha u naxariistee Gudomiyihii hore Aden Xaji Yabarow “wiish”, waxaa xilkaasi si KMG u hayey ku xigeenkii Duraan Axmed farax wuxuuna duraan xilkii gudoomiyenimo ku wareejiyey C/laahi Tarabi oo halkaasi lagu doortey,isagiina waxaa loo dhiibey xilka Xoghaye maadaama wax badan ka qabtey howlaha Sportiga dal iyo dibad.
Sidoo kale waxaa halkaasi lagu doortey Gudoomiye ku xigeeno 3 ah oo uu ku jirey Abuukar Shaamo oo kasoo jeeday qoys sportiga caan ku ahaa,iyadoo xubno gudiga fulinta ay kamid yihiin Khabiirka sports Xaaaji Coloow,laacibkii k.koleyga Baarajab,Abuukar Isloow iyo qaar kale,waxaana doorashada goob joog u ahaa Madaxda sare ee Dowladda Federaalka u qaabilsan Sportiga oo nasiib wanaag dhamaantoodba min wasaarad,agaasin iyo maamul Gobolba wada ahaayeen Bah Sports.
Waxyaabaha isbedelka ee sida weyn loogu amaani karo maamulka GOS ayaa waxaa kamid ah in markii ugu horeysey bulshada loo soo bandhigey sida iyo qaabka ay ku baxdey dhaqaalihii soo galey Hey’adda iyo sidii loo isticmaaley,taasi oo aan horey u dhicin.
Kadib doorashadaasi ayaa sida soomaalidu cadeysatey waxaa soo yeerayey ereyo mucaarad loogu muujinayo wixii qabsoomay,iyadoo xitaa an loo meel dayeynin sharci ahaanshaha ereyga diidmada oo loo adeegsanayo Ma dooneyno, waa qabiil keliya, looma dhama,nama metelo iyo nalagama tashan maamulkeena.
La yaabka qoraalada asxaabta shirarka diidmada qabatey ayaa waxaa ku jira in Xiriirka K.cagta aysan u dhameyn doorashada,waxaana halkaasi joogey oo gudiga fulinta ku jira Gudoomiyaha xiriirka K.Cagta Cali saciid Guuleed,sidoo kale ku darso la yaabka waxaan dacwad u direynaa Xiriirka Olombikada, miyeysan kala garan xiriir inaysan ahayn Olombikada aduunka.
Qofka waa inuu marka hore gartaa waxa uu kasoo horjeesanayo ma yihiin wax isaga uu xaq u leeyahay inuu ka doodo,ogaadaana in Hey’adda uu mucaaradayo aysan imaan xiligii jaha wareerka iyo nidaam la’aanta ee ay tahay Hey’ad jirtey ka hor bur burkii dowladdii dhexe.
Gudiga Olombikada ayaa waxaa uu la jaan qaadey nidaamka caalamiga ah ee jiritaanka mudo 4 sano kadibna la qabto doorasho cusub,iyadoo mar kastaahi ay doorashada xaq u leeyihiin xiriirada hoos taga GOS, ururada dhisan iyo Wakiilada zone-s oo 5 ah.
Marka sida dhabta ah loo hadlana Olombikada waxaa ay ka fekertey in Gobolada Dalka lagu balaariyo iyadoo laga duulayo doonista hor-u marinta iyo gaaarsiinta gobolada dalka qeybaha Sportiga xag farsamo iyo xag maamulba iyadoo la ogaa sida xaaladda gobolada dalka ay ahayd sanadihii danbe.
Waxaan xusuustaa erey Allaha u naxariistee Gudoomiyihii waqtiga badan hayey xilka GOS Faarax Wehliye Cadow “Sendiko” in Maamul ka mida maamulada Dalka ay idaacad ka sheegeen inaysan aqoonsanayn Gudiga Olombikada Soomaaliyeed, waxaa uu yiri horta GOS aqoonsi ugama baahna maamulkaasi ee iyagaa in la aqoonsado u baahan.
Waa dhab sababtoo ah Gudigan Olombikada isagaa loola imanayaa wixii wax qabad ah ee maamulada gobolada ay ka doonayaan inay sameeyaan,iyadoo GOS inta awoodeeda ah laga doonayportiga waase hadii lasoo weydiisto.
Aqristoow waxaa yaab iyo amakaag kuugu filan in xarun sports oo dhameystiran oo Gudiga Olombikada ka furtey qeyb ka mida Gobolada iminka wax mucaaradaya oo qarash aaad u fara badan ku baxay dhismaha garoomadaasi maanta laga dhigey meel xoolaha lagu xareeyo,taasi oo niyad jab weyn ku abuurtey dhalinyaradii ciyaaraha jecleyd.
Ugu danbeyntii waxaan kusoo koobayaa anigoo jecel in shacabka sportiga jeceli ogaadaan in
Heyaddan lagu dooran hab beel ama 4.5 isla markaana wakiilo ka socda gobolada dalka oo 5 zone loo qeybiyey oo weliba sportiga dalka caan ka ahaa ay ku jiraan ee Soomaaliyeey fadlan mar uun ka gudub qabiil,oo ka shaqeey hor u marinta Sportiga dalka qeybta kaaga aadan.